Nandar Lwin, Author at Lifestyle Myanmar
ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေသော အလေ့အကျင့် (၉)ခု
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း (သို့) ရယူခြင်းထက် စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပျော်ရွှင်မှုက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Process တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်မှုကို မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြင့် ရှာဖွေကြပါတယ်။ သို့သော် မှန်ကန်သော စိတ်သဘောထားမျိုးကို...
လူမှုရေး ဉာဏ်ရည်ကောင်းသူ (Socially Intelligent People)ရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက်
သင်ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့သူတစ်ယောက်လား?လူဟာ တစ်ယောက်ထဲ နေတာမဟုတ်ဘဲ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေတဲ့အတွက် လူ့လောကမှာ နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့၊ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လူမှုရေးဉာဏ်ရည် Social Intelligence မြင့်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအရည်အချင်းမတိုးတတ်ခင် ဘဝမှာ အတွေ့အကြုံအနည်းငယ် ရှိပါမယ်။...
သူက မင်းရဲ့ထာဝရလူဖြစ်ရင် ဒီအရည်အချင်း (၃)ချက်ရှိပါလိမ့်မယ်
မင်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ၊ အချစ်ဆိုတာ rom-com ရုပ်ရှင်ထဲကနဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ရထားဘူတာရုံ (သို့) ဘားမှာ (သို့) သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်မှာ right person ကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ သူတို့ကို တွေ့ဖူးပြီးသားဆိုပေမယ့် အချိန်က...
အတွင်းစွဲစရိုက်ရှိသူ Introvert တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှောင်ရှားဖို့ အမြဲကြိုးစားနေလိမ့်မယ့် စိတ်ဖိစီးမှု အတွေ့အကြုံများ
Introvert တွေက တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရှောင်ရှားတတ်ကြပေမယ့်လည်း အချို့သော အခြေအနေတွေကို အခြားသူတွေထက် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ထိန်းကျောင်းတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မကြာခဏ အစွန်းရောက်နေတတ်တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေက သူတို့ကို ရေနစ်သလို ခံစားရစေပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ...
သင့်ရဲ့အဆုတ်ကို သဘာဝအတိုင်း Detox လုပ်ဖို့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချက် (၈)ချက်
အကျင့်ဆိုးတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေဟာ အဆုတ်ပြဿနာတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လူ၆၅သန်းဟာ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီအင်္ဂါကို ကျန်းမာအောင် ထိန်းထားဖို့ နည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အဆုတ်တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ မှော်ဆန်သော...
အသက်အရွယ်တိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု ( Metabolism)က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
ကျွန်မတို့ အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ ဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ သူ့ရဲ့ထိရောက်မှုတို့က ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ သင့်အသက်အရွယ်မှာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကို သိလိုပါက ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဖတ်ရှုပါ။ ၁။ အသက် ၂၀အရွယ်မှာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု ကျွန်မတို့ အသက် ၂၀မှာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုက ယခင်ကထက်...
သင့်မျက်နှာကျပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ နားကပ်တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
နားကပ်တွေက အမျိုးသမီးများစွာအတွက် အရေးကြီးသော လက်ဝတ်ရတနာ အဆင်တန်ဆာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ့်မျက်နှာကျနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ နားကပ်မျိုးကို ဝတ်ဆင်တတ်မှသာ ကိုယ်ရဲ့နဂိုရှိရင်းစွဲအလှကို ပေါ်လွင်စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုမျက်နှာကျမျိုးဆို ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေ ဝတ်သင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ လေးထောင့်မျက်နှာကျ...
ရာသီခွင်တစ်ခုစီရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုကို ဖော်ပြပုံများ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထူးခြားစွာ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ၎င်းတို့ကို ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးစီတိုင်းက စိတ်ခံစားချက်တွေကို မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြင့် ပြသကြပြီး အချို့က အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့နေရာမှာ အထီးကျန်နေရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့...